Fahamendrehana, Herim-po ary Fihatsaram-belatsihy: Lehilahy Ejyptiana Naboridanin’ny Polisy · Global Voices teny Malagasy
Fahamendrehana, Herim-po ary Fihatsaram-belatsihy: Lehilahy Ejyptiana Naboridanin'ny Polisy	Voadika ny 12 Febroary 2013 4:11 GMT
Zarao: Hamada Saber no anaran'ilay lehilahy Ejyptiana, hita taminà lahasary niparitaka sy nandeha tao amin'ny fahitalavitra CNN ihany koa, lahasary mampiseho azy novonoina sy naboridanin'ireo mpitandro filaminana. Nitarika fahatezerana sy tsy finoana izany ary nampisafoaka ny firenena tao anatin'ny rikoriko. Mahaliana, olona marobe tao amin'ny media sosialy no nanomboka nanohitra ny zava-nitranga tamin'ity lehilahy ity ary eo koa ny fihetseham-pon'ny firenena manoloana izany mikasika ny herisetra ara-nofo tafahoatra sy ny fanolanana mihatra amin'ireo vehivavy Ejyptiana.
@Ghadaelsayeh: Lehibe ny fahasamihafana eo amin'i Hamada izay voavono sy ireo vehivavy niharan'ny herisetra ara-nofo sy voaolana satria mangoraka an'i Hamada ilay kanosa ny olona fa tsy mba taitra ny amin'ireo vehivavy be herim-po! Mila fitsaboana ara-tsaina [izy ireo].
@RashaPress: Aza manome tsiny an'i Hamada Saber, aza manome tsiny olona afa-baraka sy natahotra nandritra ny alina raha toa ka anaty torimaso tany an-tokantranontsika isika nandritra izany. Ny fanonomezan-tsiny ny lasibatra no tena zava-dratsy ataonao… mamindra fò ho an'ny malemy!
Zava-mifanohitra hafa mahaliana niseho ihany koa ny fijerin'ny olona mitovy amin'i Saber (eo amin'ny dimampolo taona izy) sy ny olona mitovy amin'ny zanany vavy. Nanohitra ny filazan'ny fianakavian-drainy tany am-boalohany ny zanany vavy, izay nosokajiana fa “lainga”. Nilaza ny zavatra nambarany ny bilaogy “The Arabist”:
@AhmadTal3t: Tsy mino ny olona fa misy fahasamihafana eo amin'ny olona mitovy amin'i Hamada sy ny zanany vavy! Mbola matahotra ny mpitandro ny filaminana ny olona mitovy amin'i Hamada! Tsy matahotra ny filohan'ny repoblika kosa ny olona mitovy amin'ny zanany vavy…
Taty aoriana, nanapa-kevitra nanova ilay fanambarany i Hamada rehefa avy nandre ny fihetseham-pon'ny fianakaviany sy ny Ejypsiana mikasika ny fanambarany voalohany. Niala-tsiny izy noho ny fiampangana nataony tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana, ary nilaza izy fa ireo mpitandro ny filaminana ihany no namono sy nanaboridana azy. Notsipihany ihany koa fa tsy nokaramaina izy tamin'ny filazany ny fanambarany voalohany.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraSara Labib
Tantaran'ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana farany 50 minitra izayLibanonaFahaiza-mamorona Nentin'ny Libaney Nanohitra Ny Olan'ny Fako
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Ελληνικά, Nederlands, македонски, বাংলা, English